President in a meeting with his Zimbabwean counterpart: Iran, Zimbabwe can use potentials, opportunities to serve both nations
Iran and Zimbabwe have good potentials and opportunities to develop cooperation and relations in various fields such as agriculture, science, and culture, said President Rouhani in a meeting with the President of Zimbabwe, Robert Mugabe.
In the meeting that was held on Monday, Dr Rouhani also appreciated President Robert Mugabes presence in the inauguration ceremony and said: "We consider the people of Zimbabwe as a strong and friend nation".
"Like the people of Iran, the Zimbabwean nation have fought for their independence and we have had good relations with Zimbabwe from the beginning of the Islamic Revolution," he continued saying.
During the same meeting, the President of Zimbabwe, Robert Mugabe, also said: "Your inauguration ceremony was held very well and successfully and Zimbabwe is willing to deepen ties with Iran".
"Zimbabwe has ample potentials for development in agricultural products, communication technology, mines and underground resources, as well as manpower that can act as a good base for transfer of experience and cooperation with Iran," he continued saying.
15:24 - 7/08/2017 / Number : 469412 / Show Count : 2390